Ra’iisulwasaaraha Oo Kampala Lagusoo Dhaweeyay. | Gedoonline
Ra’iisulwasaaraha Oo Kampala Lagusoo Dhaweeyay.	Added by Editor on June 28, 2012.Saved under Latest News	Muqdisho, June, 28, 2012——Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Dr. Cabdiweli Maxamed Cali ayaa si heer saro ah loogu soo dhaweeyay Garoonka Diyaaradaha ee magaalada Kampala.
Ra’iisul Wasaare Cabdiweli ayaa waxaa Garoonka diyaaradaha ee Kampala ku soo dhaweeyay Wasaarada Arrimaha Gudaha, Safaaradda Soomaaliya iyo Shacabka Soomaaliyeed ee ku nool dalka Uganda.
Wuxuuna Ra’iisul Wasaaraha uu ku tagay booqasho rasmi ah, Wuxuuna labada maalmood ee soo socota la kulmi doonaa Dhigiisa Amaama Mbabazi iyo Madaxweynaha dalka Uganda ee Yuweri Musaveni.
Sidoo kale Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya ayaa la kulmi doono Jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalkaasi ku nool.
Ugu dambeyntii Ra’iisul Wasaare Dr.Cabdiweli ayaa sidoo kale kulamo la qaadan doono Ciidamada Uganda islamarkaana booqan doono xerooyinka tababarada ee Ciidamada kala duwan ee dalka Uganda. Wuxuuna Ra’iisul Wasaaraha Ciidamada Uganda ku dhiiri geliyay iney sii dhameystiraan howsha ay hayaan ee Nabad u soo celinta Soomaaliya islamarkaana ugu mahadceliyay dadaalada ay ka geysanayaa gudaha dalka Soomaaliya.
Gaas Oo U Dhoofay Kampala.
Farmaajo Oo Nairobi Lagusoo Dhaweeyay.
“Fadeexadii Kampala” Maxaa Ka dhacay KAMPALA?
Islaan Bashiir Oo Muqdisho lagusoo dhaweeyay.
Cali Khaliif Galayr Oo Muqdisho Lagusoo Dhaweeyay.